War Deg dega Warar aad loogu kalsoonyahay oo kasoo baxay badhtamaha magaaladda Boorama.14.11.17 : Salaan Media
War Deg dega Warar aad loogu kalsoonyahay oo kasoo baxay badhtamaha magaaladda Boorama.14.11.17
Wararka shabakadd Salaanmedia ka helayso badhtamaha magaaladda Boorama ee xarunta Gobolka Awdal in xisbiga Waddani ku horeeyaa 20000(20Kun) oo cod halka meelo ka baxsan gobolka Awdal aan weli la hubin.
Wararku kasoo baxayaa gobolka Togdheer,Sanaag waxa ku horeeya cod aad u badan xisbiga Waddani .
dhibaca kale waxa soo baxaaya in 3,000 Uu ku horeeyo xisbiga Kulmiye .
Caasimadda Somaliland Hargaysa waxa dadku aad u hadal hayaa cida guushu raacayso,weli codka Waa la tirinayaa.
wararkaa Waa Hordhaca ku saabsan Caasimadda Somaliland Hargaysa Wixii kasoo kordha..
Wixii war ah ee kasoo baxa kala soco salaanmedia.
Gobolka Togdheer oo xisbiga Waddani aad ugu horeeyo
« Shacabka Somaliland Oo Aad Ugu Dhag Taagaya Ku Dhawaaqista Natiijada Doorashada Madaxtooyadda Somaliland Iyo Guddiga Komishanka Qaranka Oo La Filayo Inay Goordhaw La Hadlaan Warbaahinta+Maxaa Soo Kordhay..14.11.17
Wararka Hada Nasoo Gaadhaya Xarunta Dhexe Ee Xisbiga Waddani iyo Natiijada Ay Hayaan 14/11/2017 »